Gini mere eji mara J-147 dị ka ọgwụ kachasị mma maka ịgwọ Ọrịa Alzheimer na Ọgwụ nká?
J-147 uzuzu malitere na 2011 na Cellular Neurobiology Laboratory nke Salk Institute. Kemgbe ọ malitere, enwere ọtụtụ ọmụmụ nke gosipụtara arụmọrụ ya n'ịgwọ ọrịa Alzheimer na ịgbanwe usoro ịka nká.
Dọkịnta Dave Schubert ya na ndị ọrụ ibe ya nọ na Salk Institute rụrụ ọrụ dị mkpa na nyocha nke J-147 curcumin. Na 2018, ndị na-agwọ ọrịa ahụ kpughere usoro J-147 nke usoro nootropic na ọrụ ya na ijikwa ọrịa ndị na-adịghị na neurodegenerative.
Ihe omumu na nyocha nke ogwu a bu ihe di nkpa na njikwa nke Alzheimer's ọnọdụ. Otú ọ dị, ndị ọrụ ahụike nwere mmasị na uru J-147 dịka mmelite ncheta, na-eme ka ikike mmụta dị, na ịmaliteghachi nke neuron.
Na 2019, ndị na-ere ọgwụ malitere ịnwale ọgwụ mgbochi J-147 Alzheimer na ụmụ mmadụ.
Kedu ihe bụ Nootropic J-147 Powder?
J-147 ntụ ntụ na-enweta site na curcumin na Cyclohexyl-Bisphenol A. Ọgwụ dị mma nwere ma ihe neuroprotective na neurogenic. N'adịghị ka ọtụtụ nootropics, J-147 mgbochi ịka nká mgbakwunye na-eme ka cognition na-eme ka ọ ghara imetụta acetylcholine ma ọ bụ phosphodiesterase enzymes.
Curcumin bụ ihe na-arụ ọrụ nke turmeric ma ọ bara uru na ijikwa ọrịa ndị na-adịghị agwọ ọrịa. Otú ọ dị, polyphenol a anaghị agafe ihe mgbochi ụbụrụ ụbụrụ nke ọma. N'ihi ya, J-147 nootropic ghọrọ nke kachasị dị ka ọ na-agafe mgbochi ụbụrụ ụbụrụ na-adị mfe.
Kedu ka J-147 si arụ ọrụ?
Ruo 2018, nsonaazụ J-147 na sel nọgidere bụrụ ihe omimi ruo mgbe ụlọ ọrụ Salk Institute Neurobiologists kpebiri ihe mgbagwoju anya. Ọgwụ na-arụ ọrụ site na njikọta na ATP synthase. Mkpụrụ mitochondrial a na-agbanwe mmepụta nke ume cellular, yabụ, na-achịkwa usoro ịka nká.
Ọnụnọ nke mgbakwunye J-147 na sistemụ mmadụ na-egbochi nsị metụtara afọ nke na-esite na mitochondria na-adịghị arụ ọrụ na mmepụta nke ATP.
J-147 usoro ihe ga-emekwa ka ọkwa dị iche iche nke ntanetị dị iche iche gụnyere NGF na BDNF. E wezụga nke ahụ, ọ na-arụ ọrụ na ọkwa beta-amyloid, bụ nke dị elu n'etiti ndị ọrịa mgbe niile Alzheimer's na mgbaka.
J-147 utịp gụnyere selata na progression nke Alzheimer's, na-egbochi enwekwaghị ikike ncheta, ma na-amụba mmepụta nke sel neuronal.
Uru ndị bara uru nke J-147
A na-eme ka Cognition nwee ike
Ihe mgbakwunye J-147 na-eme ka ebe nchekwa na ogologo oge dị elu. Ọgwụ ahụ na-agbanwe nkwarụ nchekasị n'etiti ndị agadi na-alụ ọgụ na nkwarụ. J-147 maka ire ere dị ka ọgwụ na-enweghị ego na obere ọgbọ na-ewere ya iji bulie ikike mmụta.
ewere J-147 mgbochi ịka nká ọgwụ ga-emekwa ka ncheta, ọhụụ, na nghọta doo anya.
Nchịkwa nke Ọrịa Alzheimer
J-147 na-abara ndị ọrịa nwere Alzheimer uru site na ime ka ọganihu nke ọnọdụ ahụ belata. Dịka ọmụmaatụ, ịnara mgbakwunye na-ebelata ọkwa nke beta-amyloid (Aβ) soluble, na-eduga na nkwụsị nke uche. E wezụga nke ahụ, J-147 curcumin na-agbanwe ihe nrịgo neurotrophin iji mee ka ọ ghara ịlanarị ndụ, yabụ, ncheta ncheta na cognition.
Ndị ọrịa nwere AD nwere ihe ole na ole na-akpata neurotrophic. Agbanyeghị, ịnara mgbakwunye J-147 Alzheimer na-akwado NGF na BDNF. Ndị a na-ahụ maka ntanetị na-enyere aka ịmalite ncheta, mmụta, na arụ ọrụ ọgụgụ isi.
J-147 nootropic na-egbochi ọnwụ nke neuronal bụ nke kpatara nrụgide oxidative.
Mgbakwunye a na-egbochi mmechi nke ndị na-anabata NMDA (N-Methyl-D-aspartate), nke na-ahụ maka neurodegeneration.
Akingakingụ ọgwụ J-147 ga-eme ka ụbụrụ na-akpata ụbụrụ (BDNF) na ihe ndị na-akpata nhụjuanya (NGF). Ndị neurotransmitters abụọ a na-akpata ọrịa neurodegenerative dị ka Alzheimer's na dementia. Kedu ihe ọzọ, BDNF dị mkpa na neurogenesis.
Ọ na - eme ka ọrụ Mitochondrial rụọ ọrụ
Akingụ ọgwụ J-147 ga-emeziwanye ọkwa ATP n'ụzọ na-enweghị isi site na ịkwalite ọrụ mitochondrial.
Agka nká na-akpata mbelata nke mitochondria n'ihi enweghị ntụpọ na mmụba nke ụdị ikuku oxygen. Otú ọ dị, J-147 mgbakwunye na-alụso usoro a ọgụ site na igbochi ATP5A synthase. Ọtụtụ ọmụmụ na-adabere na ọgwụ maka ịgbatị ndụ mmadụ.
J-147 na mgbochi ịka nká
Dabere na Salk Researchers, J-147 mgbochi ịka nká na-eme ka mkpụrụ ndụ ndị toworo eto yie ndị ntorobịa.
Dysfunctional mitochondria na-eme ka usoro ịka nká dịkwuo elu. Cellular homeostasis ga-ebelata, yabụ, mbelata nke ọrụ physiological. E wezụga nke ahụ, mmebi cell na mmebi nke mitochondrial ga-ebute n'ihi mmepụta nke ROS (ụdị oxygen na-arụ ọrụ). Inweta ntụ ntụ J-147 ga-egbochi mmetụta a, yabụ, na-ebelata ikike.
A na-ejikọkwa ịka nká na ndalata mmụọ na ọrịa nhụjuanya. Otú ọ dị, ọtụtụ Ahụmahụ J-147 gosi na ọgwụ na-arụ ọrụ nke ọma iji weghachite ncheta ncheta, meziwanye ikike nghọta, na ịgwọ mgbaka, Alzheimer's, na ọrịa ndị ọzọ metụtara afọ.
Ọkọlọtọ nke J-147
(1) dose doseụ ọgwụ kwa ụbọchị
Typicaldị usoro ọgwụgwọ J-147 kwa ụbọchị dị n'etiti 5mg na 30mg. Nwere ike kewaa Usoro onunu J-147 n'ime abụọ. Ọkacha mma, ọgwụ gị kwesịrị ịdị na nso ala ahụ ma bulie ya ike dabere na nnabata ahụ gị.
Ihe mgbakwunye a na-arụsi ọrụ ike. Ikwesighi iwere ya na mgbede ma obu abali n'ihi na nyocha nke J-147 na-ekwu na o nwere ike imebi usoro ihi ura gi.
(2) Ndidi dose
Ndị na-eme nchọpụta jiri 10mg / kg nke usoro ọgwụ J-147 mee ihe Alzheimer's ọrịa n'ụdị oke.
Otú ọ dị, ọgwụ gị kwesịrị ịdabere na ọnọdụ gị. Were, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị ga-emeziwanye cognition gị, ị ga-ahụrịrị iji 5mg gaa 15mg. Na-emegide onwe gị, maka nchebe na nchịkwa nke nhụjuanya neurodegenerative, ị nwere ike ịgbatị ọgwụ ahụ ruo ihe dịka 20mg na 30mg.
In Ọnwụnwa J-147, ndị na-achị achị ga-ewere ọgwụ ahụ ozugbo ngwa ngwa elekere 8 nke abalị.
Ihe dị iche n’etiti J-147 na T-006
T-006 bụ ihe mgbakwasị ụkwụ nke J-147 nootropic. Ezubere ụlọ ọrụ ahụ site na dochie methoxyphenyl otu nke J-147 curcumin ntụ ntụ na tetramethylpyrazine.
Ntinye na T-006 ihe dị ka ọnwa atọ ga-eme ka ụbụrụ foogu belata ma bulie ike n'ozuzu ya. Kedu ihe ọzọ, ntụ ntụ na-abawanye okwu ọnụ ma mee ka onye ọrụ ahụ daa jụụ. N’ụzọ megidere ya, ahụmịhe J-147 gụnyere ncheta, ọhụụ, na isi ọma.
N'agbanyeghị ọdịiche ndị a na-enweghị isi, mgbakwunye abụọ ahụ nwere otu mmetụta.
J-147 ọ dị mma mgbe ị na-eji ya?
Ọgwụ J-147 dị mma. Ọ gaferela nke nyocha toxicology na ọnwụnwa anụmanụ dịka Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ (FDA) chọrọ. E wezụga nke ahụ, a nwalewo nnwale ọgwụ J-147 ruo nwa oge.
Enweghị ndekọ nke ọghọm Mmetụta J-147 na ọnwụnwa na nke nnwale mmadụ.
J-147 ikpe ahụike
Akụkụ mbụ nke usoro ọgwụgwọ J-147 malitere na mbido 2019 dị ka nke Abrexa Pharmaceuticals na-akwado, Inc. Ebumnuche nke ọmụmụ ihe ahụ bụ iji tụlee nchekwa na ndidi nke ị na-ewere nootropic, yana ọgwụ ya na ọgwụcokinetic na isiokwu ndị dị mma.
Ọmụmụ ihe ọmụmụ ahụ metụtara ma ndị na-eto eto ma ndị agadi. Otu nyocha ahụ enweghị usoro, isi abụọ, na ebe a na-achịkwa ebebo na otu na-arịgo elu.
Na njedebe nke ikpe mmadụ, ndị ọkà mmụta sayensị ga-achọpụta ihe ga-esi na ya pụta na mmetụta ọjọọ, ọnụọgụ obi na ụda, mgbanwe anụ ahụ, na Uru J-147 na usoro nyocha.
Nyocha onye ọrụ / ahụmịhe mgbe ị jiri J-147
Lee ụfọdụ nyocha J-147;
“… Ike gwụkwala gị ike ná mmalite. Ọ bụghị caffeine ma ọ bụ ụdị ike amphetamine, kama ọ bụ ike nkịtị. Enwere m obi ụtọ na oge a ebe m nwere ike iche echiche banyere ịme ihe dịka ịgba ịnyịnya ígwè, wee mee ya n'enweghị obi abụọ ma ọ bụ nwee ike ime ka m kwenye ịmalite. Kpali onwe m enweghị mgbalị. Nke a gbasasịrị kpamkpam mgbe izu ole na ole gasịrị, ọ bụ ezie na enwere m obi ụtọ nke a, ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị eme, yabụ ana m edepụta nke a dị ka mmetụta nwere ike. ”
“Ọ dị ka ihe na-adọrọ mmasị ma na-ekwe nkwa nootropic. O doro anya na e nwere ụlọ ọgwụ na United States afọ gara aga. ”
Onye ọrụ ọzọ na-ekwu;
“Ọ dị mma, enwetara m ya ụnyaahụ ma ewerela m 10mg maka ọgwụ 3. Enwere m ya n'ụzọ aghụghọ ma gbazee nke ọma. Ọ naghị atọ ụtọ. Ikike ozugbo malitere ọsọsọ maka m. Ọhụụ m na uche m yiri ka ọ dị nkọ n'ụzọ ụfọdụ, mana ọ nwere ike ịbụ naanị placebo. Ọ dị ka ọ nweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla, mana ọ bụ n'oge na-adịghị anya ịkọ… Ọ dị m ka ihe ọ bụla dị mma ma mee ka ụbọchị 10 ọzọ na-eme ka m nwee ume ụbọchị niile na elekere isii nke ụtụtụ. ”
"Anọgidere m na-ewere J147 na-enweghị uru ọ bụla ọzọ karịa belata mbufụt na ọzịza ahụ ekwuru na mbụ."
Ebee ka anyị ga-enweta ntụ ntụ J-147?
Iwu iwu nke nootropic a ka na-abụkarị esemokwu mana ọ gaghị egbochi gị ịnweta ngwaahịa ziri ezi. Ka emechara, J-147 nke Alzheimer ọnwụnwa ahụike na-aga n'ihu. Can nwere ike ịzụta ntụ ntụ na ụlọ ahịa n'ịntanetị ka ị nwetara ihe ùgwù iji tụnyere ọnụahịa J-147 gafee ndị na-ere ahịa dị iche iche. Agbanyeghị, ịkwesịrị ijide n'aka na ị na-azụ ahịa site na ndị na-eweta ọrụ bara uru yana nyocha ụlọ nyocha nke onwe.
Lapchak, AP, Bombien, R., na Rajput, SP (2013). J-147 a Novel Hydrazide Lead Compound Iji Na-emeso Neurodegeneration: CeetoxTM Nchedo na nyocha nke genotoxicity. Akwụkwọ Neurology na Neurophysiology.
Tupu, M., et al. (2013). Neurotrophic Compound J147 Na-agbanwe Mmetụta Mmetụta na Mice Ọrịa Alzheimer. Nchọpụta & ọgwụgwọ Alzheimer.
Ọgwụ Alzheimer na-agbanyeghachi na elekere na Powerhouse nke Cell. Ulo Salk.January 8, 2018.
Qi, Chen., Et al. (2011). Ọrịa Neurotrophic Novel maka Mmetụta Na-akpata Ọrịa na Ọrịa Alzheimer. Akwụkwọ Ọbá Akwụkwọ Ọha.
Daugherty, DJ, et al. (2017). Akwụkwọ akụkọ Curcumin nke Novel maka ọgwụgwọ Ọrịa Neuropathy.
Lejing, Lian., Et al. Okwu (2018). Ihe na-egbochi ịda mbà n'obi-dịka Mmetụta nke Novel Curcumin Derivative J147: Ntinye nke 5-HT1A Neuropharmacology.
Raw J-147 ntụ ntụ (1146963-51-0)
2.Gịnị bụ Nootropic J-147 Powder?
3.Olee otu J-147 si aru oru?
4. Uru Nweta nke J-147
5.J-147 na mgbochi ịka nká
6.Standard Dose nke J-147
7. Ihe dị iche n'etiti J-147 na T-006
8.J-147 ọ dị mma mgbe ị na-eji ya?
9.J-147 ikpe ahụike
10.Umu nyocha / ihe omuma mgbe i jiri J-147
11.Kedụ ebe anyị ga-esi nweta ntụ ntụ J-147?